शब्दकोश: चरालाई पनि छैन सुख
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, August 28, 2010
वेदनाथ पुलामी (उमेश ) August 28, 2010
प्राकृतिक रुपमा स्वतन्त्र रहेका बस्तुहरु लाइ पनि निस्फ्रिक्री र सजिलो छैन जीवनयापन गर्न !
त्यसैले हरेक ले प्रगति र विकाशको लागि संघर्ष र सकारात्मक प्रयत्न भने गर्ने पर्ने हुन्छ !
अनि केन्याको जस्तो दीर्घ समय नलागोस -नेपालमा संबिधान लेख्ने कार्य !
Dilip Acharya August 29, 2010
फेरि पनि 'एउटा टिकटमा दुइटा मजा' हुने पोस्ट रहेछ । गजल भन्दा माथिको 'भूमिका' जति सान्दर्भिक छ, गजल पनि त्यत्तिकै जोडदार।
किन किन यी हरफहरु भने साह्रै चित्त बुझ्ने लागे ।
दीपक जडित August 31, 2010
चरा त उड्छ नै यो शेरमा भने तपाईंको कलम पनि उडेको छ है बेग हानेर ।